Ukutshala strawberry kusayithi lakho, abaningi sebeqala uphumule bese ulinda isivuno efanayo uzolunga. Kodwa eqinisweni, ekunakekeleni lo berry akuyona elula njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Uma yokuqala 1-2 iminyaka kuba ukuthambisa esifike ngesikhathi, ukuvundiswa nokususwa ukhula, bese ngemva kweminyaka embalwa, kuyafaneleka ngizibuza indlela esihlalweni strawberry.
Into wukuthi emva evuna isitshalo uqala ngenkuthalo ziyanda. Ngamunye izihlahlana itshalwe ake emilibeni ukuthi phakathi nenyanga sisekelwe phansi. Kuleli qophelo kube kwakhiwa isitshalo entsha. Ngenxa yalokho, ngisho noma ulandela yonke imithetho mayelana nendlela abantu abangu-strawberry, futhi ibekwe otshanini abasha imigqa ububanzi, siqiniseke ukuthi ibanga phakathi izithombo babe okungenani 15-20 cm, e 3-4 iminyaka lesi sitshalo kuyoba kakhulu, baba bayohlabela nomunye. Phela, ukufika kuqala kumele kwenziwe ekuqaleni kwentwasahlobo noma ekwindla.
Kusukela onyakeni wesibili, zonke ehlathini iqala baphonse amadevu akhe. Phakathi nale nkathi, ngesikhathi isitshalo umzali ngamunye kufanele abunjwe mayelana 3-5 abasha. Ngalesi sikhathi, umsebenzi wensimu iwukuba kuhlanzwe izimpondo nge izindlela engadini futhi ukuqinisekisa ukuthi zisekujuleni ngokulinganayo phezu ndawo. Qiniseka watch out for inani amahlumela amasha, ungashiyi ezingaphezu kuka 5 ezihlabayo entsha, eyatholakala kusukela isitshalo umzali ngamunye. Lapho wabo unayo, ayanda amathuba isifo akhiqize izithelo ezincane ngenkathi yokulima elandelayo.
Kusukela onyakeni wesithathu emva betshala balimi abe nolwazi okuwusizo mayelana nendlela abantu abangu-strawberry. Phakathi nale nkathi, kubalulekile ukugcina zonke amadevu entsha, awudingi ezihlabayo entsha. Kukholakala ukuthi lokhu berry muhle ukuthela izithelo kuze iminyaka 5 zokuphila ke kubalulekile ukubeka endaweni entsha kokwehla noma rejuvenate ubudala.
Ukudala klubnichnika entsha ungenayo ukuthenga izithombo ezintsha. Vele Khetha izitshalo ezisencane eziye iphuma izimpondo, Ketha nabo esigaxeni bese efakwa endaweni eyayibekelwe ngokukhethekile ngabo. Khetha Clumps esikhulu kakhulu uhlelo impande evuthiwe futhi yisikwele rosette kwakhe amahlamvu. Udinga nje kuphela ukuba ukhethe lezo zitshalo ukuthi babe okungenani inyanga.
Sikhishwe yokuthi strawberry ithoma amadevu kuphela emva fruiting, kwesihlahla abasha ukuthi kungenziwa itshalwe sezivele ziyavela kuka-August. Inyanga lokugcina ehlobo kanye ngenyanga yokuqala ka ekwindla - lena ngenkathi engcono esihlalweni strawberry. izitshalo Young isikhathi singagxila kahle indawo entsha phambi yesithwathwa ebusika. By endleleni, ungakhohlwa ukumboza amahlamvu bawa klubnichnik, kuyasiza ukugwema ezihlabayo umnkantsha.
Kodwa kukhona esinye isimiso, njengoba izithombo sitrobheli ekwindla. Beka izitshalo osemusha okumelwe abe yikho kancane mkhulu kunokhalo e okutshalwe entwasahlobo. Lokhu kungenxa yokuthi kungakhathaliseki ukuthi nawe embozwe ezihlabayo, abanye babo namanje awukwazi ukususa ngezikhathi zasebusika obubandayo. Akufanele lizihawukele, entwasahlobo uthola abasha ukulingana ukushuba oyifunayo, okuyinto uzoqala ngenkuthalo zikhule.
Uma ulandela yonke imithetho ukunakekelwa, ungakhohlwa indlela abantu abangu a sitrobheli, ungakwazi ukujabulela iminyaka eminingi kwesivuno esihle futhi ezinkulu amajikijolo elimnandi. A kabusha ukuthenga izithombo ezintsha kufanele kuphela uma ufuna ukuthenga ezihlukahlukene entsha abanye.
Indawo Yendawo YaseMoscow - Ngokushesha Futhi Inenzuzo
Autumn Umanyolo kuzosiza engadini yakho ebusika "nezilwane"
Ngokufuywa kwezinyosi kwa-Ukraine: ukuqala indlela ukuthuthukisa ibhizinisi
Kungani Uthingo umcibisholo? Izizathu eziyinhloko
Izikhulu Kievan Rus. Duke Amandla Kievan Rus '
Indlela yokwenza zabasebenzi inkontileka kuze kube phakade?
Cinema "Cosmos" (Ekaterinburg). Imfihlo eminyakeni engamashumi ayisihlanu okuphumelela
Zethempeli lasendulo. Elements bokwakha lasendulo
Ibhizinisi uhlelo confectionery ibhizinisi kusuka ekuqaleni. Yini ukuba sizicabangele?
Indlela bopha isipho?
Ungavimbela kanjani inombolo ku- "Android" futhi uzilondoloze kumakholi angafuneki
Uyini intela ngabanye?